कपाल | Ratopati
जे गरे पनि चाया गएन ? अब यो उपाय अपनाउनुहोस् access_timeमंसिर १४, २०७७
एजेन्सी – कपाललाई राम्रो बनाउन मानिसहरु विभिन्न प्रकारका उपायहरु अपनाउँछन् । महङ्गो प्रोडक्टस्को प्रयोग, डाक्टरको सल्लाह लिने, आयुर्वेदिक तरिका, घरेलु उपाय लगाउने गर्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा जति गरेपनि यसबाट छुटकारा पाउन गाह्रो हुन्छ । मुङ्गको दाल यो दाल ...
तपाईंका यी गल्तीका कारण झर्छ कपाल, नगर्नुस् यस्ता ६ गल्ती access_timeभदौ १५, २०७७
एजेन्सी – कपालको समस्याले धेरै मानिसलाई सताएको हुन्छ । कोही कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुन्छन् भने कोही कपाल पातलो भएका कारण चिन्तित हुन्छन् । हरेक व्यक्ति आफ्नो कपाल लामो, बाक्लो, चमकदार र स्वस्थ्य होस् भन्ने चाहाना राख्छन् । तर, कम मात्रै मानिसलाई थाहा हुन्छ कि कपा...
के मानसिक तनावले कपालको रङ परिवर्तन गर्छ ? access_timeमाघ १०, २०७६
के मानसिक तनावले कपालको रङ परिवर्तन गर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ ‘गर्छ’ भन्ने आएको छ । यो दाबी अमेरिका र ब्राजिलमा गरिएको अनुसन्धानले गरेकोे हो । उक्त अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताहरुले मुसाको प्रयोग गरेका थिए । मुसामाथि गरिएको अनुसन्धानका अनुसार कोशिका...
एकैदिनमा पनि कपाल बढ्ने गति फरक फरक हुन्छ ! access_timeपुस १९, २०७६
तपाईं कपाल वर्षभरिमा कतिपटक काटनु हुन्छ ? तपाईं–हामीमध्ये प्रायःधरै महिना–दुई महिनामा कपाल काट्छौं होला । तपाईं– हामीले याद गरेको पनि होला–तालु खुइले बन्दै गईरहेको वइक्तिमा कपाल त्यति चाँडो बढ्दैन । तर युवाहरुमा चाहिँ कपा...
के मृत्युपश्चात पनि नङ्ग र कपाल बढ्छ ? access_timeकात्तिक २०, २०७६
मरेपछि मानिसको शरीर के हुन्छ ? धड्कन रोकिन्छ, रगत चिसो हुन्छ र अरु अंगहरु कक्रक्क पर्न थाल्दछ तर नङ्ग र कपाल भने बढिरहन्छ – कम से कम हामीलाई यस्तै कुराहरु सुन्दै आएका छौँ । एरिक मारिया रेमरक्युको उपन्यास ‘अल क्वाइट अफ द वेस्टर्न फ्रंट’ का युवा...